Muxuu yahay Qolka dad badan ku badbaadeen ee ‘Al-Shabaab ay gali waayeen’? | Gaaroodi News
Maamulka Hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho, oo dhawaan la weeraray, ayaa sheegay inay dayactir ku wadaan hoteelka, dibna loo furi doono.
Qaabkii uu ku baxsaday Mucallimuu
Mucallimuu ayaa ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxa
Maxamed Ibraahim Macallimuu oo horay uga tirsanaa BBC-da ayaa ka mid ah dadka ka badbaaday qaraxa hoteelka Elite, kaasoo uusan wax dhib ah kasoo gaadhin.
Mucallimuu wuxuu ka badbaaday dhowr qarax oo hore, oo uu kamid ahaa mid uu ku dhaawacmay 21-kii January 2016, ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka uu uga baxsaday Elite Hotel.
“Aniga horey kama cararin ee waxaan husbaday sida ay wax u socdaan iyadoo wadnuhu sida durbaanku ii garaacayo. Waxaan gacanta ku qabsaday labadii telefoon ee aan watay waxaanan goostay inaan ka boodo gidaarka dhanka xeebta oo noo dhawaa ,laakiin rasaasta ayaa meel walba ku dhaceysay,”
“Go’aan ayaan qaatay waxaan u booday dhanka badda, funaanad aan xirnaa oo cagaar aheyd ayaan iska bixiyay sababtoo ah midabada qaar sida casaanka iyo cagaarku dadka badan ee cararaya waa lagaa dhex toogan karaa,” ayuu yiri Macallimuu.
Weriyaha ayaa sheegay inuu markii uu badbaaday uu billaabay baadigoobka saaxiibkii Cabdirisaaq, kaasoo loo sheegay in meydkiisa uu yaallo cisbitaalka Umma. Waxa uu tilmaamay in geerida ninkaasi ay si weyn u taabatay oo ay uurkutaalo ku reebtay.
Shan saacadood ayey ciidanka amniga la tacaalayeen weerarkaas.
Jeneral Cabdiraxmaan Maxamud Tuuryare, taliyihii hore ee NISA ayaa BBC-da u sheegay in Al-Shabaab ay markasta weerarradooda xoojiyaan xilliyada kala guurka ah.
“Dowlad kasta marka xillegeedu dhamaan rabo, weerarrada iyo hawlaha ay fulinayaan [Al-Shabaab] waa ka badan yihiin mararka kale. Marka lixda bilood ee soo socota aad ayay khatar u yahay,” ayuu yiri Jen. Tuuryare.